स्वस्थ रहन शरीरलाई आवश्यक तत्व – MEDIA DARPAN
स्वस्थ रहन शरीरलाई आवश्यक तत्व
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार १६:४१
शरीर स्वस्थ राख्नका लागि विभिन्न तत्वको आवश्यकता पर्दछ । ती तत्व के बाट पाइन्छ र कति मात्रामा चाहिन्छ ?
थाह पाइराखौँ :
९. आइरन :अक्सिजन कोषहरुमा पुरयाउन आइरन चाहिन्छ । शरीरका केही इन्जाइम बनाउन पनि आइरन चाहिन्छ । रगत र कोष स्वस्थ राख्न पनि आइरन जरुरी हुन्छ । प्रतिदिन ८ मिलीग्राम आइरन सेवन गर्नुपर्छ । आइरन गेडागुडी सागपात, बदाम, ओखर आदिमा पाइन्छ ।
दुर्घटनामा परेको विमानमा मेडिकल अध्ययन सकेर नेपाल फर्र्कदै गरेका १७ विद्यार्थी